२००० रुपैयाँको लोभमा अवैध गर्वपतन गराउने डाक्टर प्रहरीको फन्दामा !
ARCHIVE » २००० रुपैयाँको लोभमा अवैध गर्वपतन गराउने डाक्टर प्रहरीको फन्दामा !
काठमाडौँ - अवैध गर्भपतनको आरोपमा इटहरीस्थि पशुपति अस्पतालका संचालक पशुपति चौधरी र डा.बालकृष्ण साह पक्राउ परेका छन् । चौधरी गत वर्ष नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकको आरोपमा सिआईबीले पक्राउ गरेका व्यक्ति हुन् ।
पक्राउ परेकाहरुलाई अदालतमा पेश गरी प्रहरीले गर्भपतन सम्बन्धि ऐन अनुसार कारबाही गरिने बुझिएको छ । ऐनअनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । यता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले पनि घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रकाशित : Wednesday, June 21, 2017